TALOOYIN SARE OO KU SAABSAN CARNATION TURKIGA SII KORDHAYA - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Inta badan jardiinooyinkeena waxaad ka heli kartaa dhalaalaya, midab badan, Qodobo badan oo ubaxyo ubax leh - carnation turkiga (Dianthus barbatus). Dooxdeeda caanaha ah waxay u egtahay mid gaar ah oo ku saabsan qaabka cawska ah ee lagu daro caleemaha ubaxyada ama noocyada kale ee carnation Turkiga laftiisa.
Ma taqaanaa? Carnation Turkish ma aha oo kaliya muuqaal muuqaal ah, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay caano, jilicsan, urta basbaaska.
Wax yar oo ku saabsan carnation Turkiga
Carnation Turkish waxaa ku jira sharaxaad soo socota: waa laba-sano jir ama ubax dilka ah oo leh ubaxyo qoyan oo ubaxyo ah oo leh daloolo kala duwan. Petals waa qandaraas, waa fudud ama gaajo. Midabka tufaaxa ayaa ah kan ugu kala duwan - waxaa jira noocyo monofonic ah, waxaana jira 3-4 dabeecadood oo isku dhafan. Midabka ubaxa waa caddaan, casaan-cadaan, raspberry-casaan, casaan cad-madow, casaan cad-casaan, caddaan-casaan, raspberry-cad, casaan-burgundi, midab-cad, maroon madow, iwm.
Waa muhiim! Duufaannada Turkiga ayaa si buuxda u shaqeeyaa sanadka labaad kaddib marka la furo. Sannad kowaad, dhirta waxay qaadataa xidid iyo koraa caleenta.
Leaves - Dheecaan dhaadheer oo dheer, oo leh cagaar cagaaran oo cagaaran. Gawaarida - qummanaan, xoog leh, oo leh jilcis yar. Heerka sare ee Turkigu waa gaabis, ilaa 14-15 cm ee dhererka, iyo dheer - 45-55 cm iyo xitaa ilaa 65-70 cm ee height.
Doorashada meel si ay u koraan carnation turkiga
Warshadu waa mid aan qabyo ahayn oo uma baahna shuruudo gaar ah oo sii kordhaya. Carnation Turki si siman u habboon koritaanka beerta, iyo ubax ama barkad weyn oo furan beerta. Waxa kaliya ee kaliya waa in ubax ma jecla qorax xoog leh, iyo waxaa lagu talinayaa in ay ku beeri si ay galabtii geedka wuxuu ku yaal hooska qayb ahaan. Inkasta oo cimiladeena, carnation turkigu si fiican u koraan oo u dulqaadan kulaylka xagaaga iyo qorraxdu si toos ah u wanaagsan. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku beerato warshad heer sare ah, oo ah goob aan roobabku joogsanayn.
Diyaarinta ciidda ka hor beerashada
Carnation Turkish waa mid ka mid ah ubaxyo yar yar oo ciidda, ama halkii ay ka kooban, wax badan maaha. Laakiin wuxuu jecel yahay carrada ciidda iyo ciidda leh daciif ahaan alkaline ama acidity dhexdhexaad ah. Waa ka fiican, dabcan, haddii ciidda waa mid bacrin ah, iyo haddii aysan ahayn - waxaad ku dari kartaa bacriminta leh arrinta organic ama Bacriminta macdanta. Waxa ugu muhiimsan waa in ciidda si wanaagsan loo lebistay oo aanay jirin biyo-joojin. 2-3 toddobaad ka hor inta beero, qodo garab si qoto dheer ah 20-25 cm, ka dibna si taxadar leh u heer sare. Haddii loo baahdo, marka qodo, Bacriminta waxaa lagu dabaqaa - kuwani waxay noqon karaan Bacriminta macdanta, iyo compost, humus, iyo ash xaabada.
Beeridda abuurka ah ee carnation Turkiga ee dhulka u furan
Waxaa jira laba xilliyo ah marka ay suurtagal tahay in lagu beero carnation Turkiga oo ah dhul furan - horraanta gu'ga iyo badhtamaha xilliga guga. Ka hor inta beerto geedka, inta badan waa dhexe - dhammaadka April, ciidda waa la furfuray oo qoyan. Qulqudhin leh qoto dheer oo ah 1-1.5 cm, ku shub biyo ka badan diiqadaha, ku beeraan abuurka, kula saydhaa dhulka iyo ku shub ka soo waraabiyo karaa sprayer. Ama, waxay biyaha ku daadiyaan daloolka, iyaga ku rusheeyaa, laakiin ha u waraabin, laakiin waxay ku daboolaan maro adag ama filim ka hor inta aanay bilaabin Gagaash. Masaafada u dhexaysa abuurka waa 1.5-2 cm, masaafada u dhaxaysa safarka ugu yaraan waa 13-15 cm.
Sidee loo abuuraa abuurka carnation turkiga - qoyaan ama ma? Ka hor inta aadan abuurin dhowr saacadood, waxaad ku rusheyn kartaa biyaha heerkulka qolka, laakiin ma sameyn kartid tan. Haddii, si kastaba ha noqotee, qooyay, ka dib, biyaha daadi, waxaad u baahan tahay in xoogaa yar aad qallajiso miraha shukumaan, suunka, si aanay u wada joogin marka la beero. Xilliga jiilaalka, geedka waxaa lagu beeray dhammaadkii Sebtembar - horraantii Oktoobar.
Waa muhiim! Carnation turkiga markii ay ka soo korodhsatay abuurka xilliga dayrta ayaa leh hal dabeecadood - midkoodna abuur iyo dhulkaba biyo qoyan. Abuurtaan miraha gebi ahaanba aan waraabka lagu darin ciidda qallalan.
Dalagyada xilliga qaboobaha ee xilliga qaboobaha, kululaynta, daboolo laamood caleemo, caws, hay, oo la gooyo guga.
Isugeynta dhirta kale
Duufaan Turki ah ayaa lagu daraa inta badan oo dhan ubaxyo badan oo aan qabyo ahayn iyo geedo yaryar. Ku habboon xayawaanka alpine, dheryaha waddooyinka, abuurista qaabab badan oo kala duwan oo ku yaal jardiinooyinka iyo sariiraha ubaxa, verandas iyo quraaradaha qurxinta. Waxay u egtahay mid weyn oo ku jirta bouquet waxaana badanaa loo isticmaalaa sidii ubax loogu talagalay weel.
Ma taqaanaa? Blooming turkiga muddo dheer - waxay qurxin beer ama ubax ah 28-30 maalmood.
Daryeelka Carnation Turkiga
Carnation turkigu ma aha mid madaxbannaan, adag, iyo Daryeelka iyada, guud ahaan, waa mid fudud - qaadashada, jaridda dhirta, waraabinta saxda ah. Ka dib markii beerashada biqilka wuxuu dhacaa 10-14 maalmood. Saddex usbuuc ka dib, caleemaha koray ayaa qoob-ka-dhacaya (fiidkii), oo ka fogaanaya meel aan ka badnayn 5-7 cm inta u dhaxeysa. Kadib markii wax yar ka qulqulaya dhulka, waxaad ku dabooli kartaa sprouts mar labaad filim ama maro dhawr maalmood. Ka dib markii la beero abuurka iyo ka hor biqilka, dhulka waa in si joogto ah qoyan. Next, biyo geedo sida ciidda u engegan.
Waraabinta, jaridda dhirta iyo dabacsanaanta ciidda
Biyaha waraabinta kaliya sida loogu baahan yahay. Iyo dalagyada dhalinyarada ah ee carnation Turkish, iyo dhirta qaangaarka ah ee jirradoodu waxay u dhacaan oo u dhintaan qoyaan joogto ah.
Waa muhiim! Qoyaan xad dhaafka ah ayaa halis ugu jira geedaha sii kordhaya iyo kuwa qaangaarka ah. Waraabinta cardinta Turkiga waa inay had iyo jeer noqotaa mid dhexdhexaad ah.
Weedhidda waxaa loo sameeyaa haddii loo baahdo, ka qaadashada haramaha iyo samaynta maaraynta gacmeed ee ciidda. Loosen ciidda ka dib waraabinta iyo bacarimiso bacriminta.
Goorta iyo sida loo sameeyo dhar xidhashada
Dharka ugu sareeya ee carnation Turkish waxaa loo fuliyaa si loo dedejiyo koritaanka iyo saaxiibtinimo, ubax badan. Waxaad bilaabi kartaa bacriminta sprouts in ay gaareen dhererkoodu yahay 8-10 cm Isticmaal bacriminta sulfate, potassium sulfate ama dharka guud ee dhirta ubaxyada. Mar labaad, waxay ku quudiyaan carnation turkiga bilowga hore ee ubax marka burooyinkeeda u muuqdaan. Qiyaasaha daaweynta nafaqada oo dhan waxay ku xiran tahay tilmaamaha.
Ka dib markii uu dhirta uu jajabiyay, waa la gooynayaa - ubaxyada ayaa la gooyaa oo baadiyaha lafteeda ayaa yareysa (5-7 cm). Iyo dayrta, ka hor bilawga ah ee dhaxan, waxay ku daboolaan caleemo dhoobo ama rusheeyey leh peat, hay, caws engegan.
Ma taqaanaa? Noocyada caanka ah ee loo yaqaan "Scarlet Beauty", "Black", "White Queen", "Bayer", "Diabund-F1", "Hindi Hit", "Summer Fantasy", "Nigricans", "Navern F1", "Novo -Clown-F1, Little Willy, Masar, Miraageed, Ondine, Dynasty F1, Mountain Roob, Naqshad Midab.
Cudurada iyo cayayaanka ee carnation Turkiga
Beerta Turkiga, sida dhirta kale, waxay ku xiran tahay cayayaanka iyo cudurrada qaarkood. The cadowga ugu weyn waa kalluunka xagjirka (Fusarium), taas oo ka timaad sabab u ah qoyaanka ee ciidda. Haddii geedka jiran yahay, waa la jarjaray oo la gubay, meesha ayaa lagu daaweeyaa jeermis dilaha-fungicide. Waxaa sidoo kale jira cudur fangas ah oo ka mid ah carnation Turkiga, sida heterosporia - dhaawacyada caga-garaaca caleenta caleemaha. Calaamadaha ugu horreeya, dhirta bukaanka ah waa la burburiyaa, kuwa caa fi maadana waxaa lagu buufiyaa dareeraha Bordeaux,
Nafaqeynta lakabyada layiraahdo carnation Turkish
Layers ka sameeyaan dhirta laba-sano jir ah - jiifay afkoda dhulka, iyaga ku rusheeyaa carrada iyo, hagaajinta, waxoogaa tamped ah oo qoyan. Isla mar ahaantaana, caarada ee stem nadiif ah ayaa laga tegay tooska ah - taas awgeed, waxaa lagu xiraa qulqulka la jiiday. Ciidda waa la waraabiyaa, ma ogolaato qalajin buuxa. Ka dib 1 - 1.5 bilood, jirida prikopanny ayaa siinaya rooting, gooynta soo baxday waxaa laga soocayaa kaabaha uterine iyo lagu beddelaa goob cusub.
Asal ahaan, waa wax walba oo ku saabsan carnation Turkiga ah ee aad u baahan tahay inaad ogaato for ay taranta. Iyada oo dadaal yar la sameeyo inta lagu jiro beerashada iyo daryeelka Waxaad heli doontaa sariirta ubaxa leh ee quruxda leh ee ubaxaaga goobtaada.
Noocyada wisteria sii kordhaya beerta
Qajaarka waraabinta ku habboon ee lagu koriyo
Sidee loo daryeelaa beer yar oo qaab-qaabeyn ah? Qeexida sawirrada iyo xeerarka guryaha koraya
Waraabinta saxda ah ee orchid inta lagu jiro ubax waa dammaanad ah quruxda iyo caafimaadka ee warshad xarrago leh.
Qorshaha nuujinta digaagga broiler leh antibiotics iyo vitamiin
Rhubarb waa geedo digaag ah oo ka mid ah qoyska buckwheat, oo leh rhizome xoog leh iyo caleemo ballaaran, oo ku yaalla dheriga iyo dheer petioles. Petioles waxay ku koraan ilaa 80 cm oo dherer ah ilaa 4 cm oo weyn, miisaankoodu wuxuu gaari karaa ilaa 1 kg. Qodobkani waxaan ka hadli doonaa sharciyada koritaanka iyo qashinka. Read More
La dagaallama digaagga oo leh aragti gaaban - Shamo shimbir
Iskudhaf tayo sare leh oo caadi ah - Canab yaryar
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Warshad ornamental koraya 2020